IZINGA ELIPHEZULU uchungechunge esiteshini double - China Kingswel Imishini
Lolu chungechunge kuba imodeli lokulungiswa PGB chungechunge. ethuthukisiwe ngokugcwele uhlelo plasticizing, high quality, isivuno ephakeme ukusetshenziswa ongaphakeme. isikali umshini Small ubamukela eziphambili kakhulu ekubumbeni ezihambayo uhlelo iyashesha futhi namthelela. Ijubane ezihambayo 50% ngokushesha kunokuba uhlobo evamile. isikali Big usebenzisa kahle lolusetulu kwagezi, kungasindisa abangaphezu kuka-25% amandla kuka uhlobo evamile. IZINGA ELIPHEZULU uchungechunge elincane igalelo udini umshini PLC ne-Human-umshini esibonakalayo, operation touch, elula futhi elula. ethuthukisiwe ngokugcwele pla ...
Lolu chungechunge kuba imodeli lokulungiswa PGB chungechunge. ethuthukisiwe ngokugcwele uhlelo plasticizing, high quality, isivuno ephakeme ukusetshenziswa ongaphakeme.
isikali umshini Small ubamukela eziphambili kakhulu ekubumbeni ezihambayo uhlelo iyashesha futhi namthelela. Ijubane ezihambayo 50% ngokushesha kunokuba uhlobo evamile.
isikali Big usebenzisa kahle lolusetulu kwagezi, kungasindisa abangaphezu kuka-25% amandla kuka uhlobo evamile.
IZINGA ELIPHEZULU uchungechunge igalelo encane udini umshini
PLC ne-Human-umshini esibonakalayo, operation touch, elula futhi elula.
ethuthukisiwe ngokugcwele uhlelo plasticizing, high quality, isivuno ephakeme ukusetshenziswa ongaphakeme.
ethuthukisiwe ngokugcwele extrusion die ikhanda, ukugeleza impahla ngokushelela, impahla & umbala ushintsha ngokushesha.
Hlakulela yakamuva clamping uhlelo, clamping force on isikhunta iyunifomu, kwenze okuhlala.
I eziphambili kakhulu ekubumbeni ezihambayo uhlelo iyashesha futhi namthelela. Ijubane ezihambayo 50% ngokushesha kunokuba uhlobo evamile.
ukusebenza kahle eliphezulu futhi kwagezi, kungasindisa engaphezu kwengu-20% amandla kuka uhlobo evamile.
IZINGA ELIPHEZULU uchungechunge esiteshini double ipharamitha
Umshini Model Ukucaciswa
Max. Umkhiqizo Ivolumu (L)
Shano Dimension ( L × W × H m )
Umshini isisindo ( t )
Intulo Ububanzi (mm )
Intulo L / D
Extruder Motor Amandla ( kW )
Ukushisisa Amandla ( kW )
Umthamo Plasticizing (kg / h)
Ipulatifomu lift unhlangothi (mm)
Isikhunta Platen (W × H mm )
Min. Isikhala (mm )
Max. Isikhala (mm )
Unhlangothi Okunzima (mm )
Uhlobo Amafutha Pump
Pump Lokufuduka( cm 3 / rev )
Motor Amandla ( kW )
System Kulinganiswe ngo Pressure ( MPA )
Umfutholuketshezi Servo System
Pump Lokufuduka( L / min )
System akalwe Amandla ( MPA )
Three izintambo Isigaba Four
Ubude akalwe Amandla ( kW )
Isilinganiso Energy Ukusetshenziswa ( kW )
Air Ukusetshenziswa ( m 3 / iminithi )
Umthombo Water Pressure ( MPA )
Amanzi Ukusetshenziswa ( L / iminithi )
Previous: IZINGA ELIPHEZULU uchungechunge wesiteshi esisodwa